राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख महराले गरे गोलमाल, ऐन विपरित ४ जनाको तलब आफ्नै खातामा ! « Nepal Bahas
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख महराले गरे गोलमाल, ऐन विपरित ४ जनाको तलब आफ्नै खातामा !
प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७६, आईतवार ०९:४६
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चार स्वकीय कर्मचारीको सूचीमा आफ्नै नाम राखेर ऐनविपरीत सुविधा लिँदै आएका छन् । तिमिल्सिनाले दुई सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगीको ठाउँमा आफ्नै नाम उल्लेख गरेर तलब सुविधा बुझ्ने गरेको खुलेको हो । जब कि उनले संसद् सचिवालयबाट बेग्लै चालक प्रयोग गरिरहेका छन् ।
आज नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार तिमिल्सिनाले प्रतिचालक मासिक १८ हजार तीन सय ४० र प्रतिकार्यालय सहयोगी १६ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ तलब बुझिरहेका छन् । चारजनाको कुल तलब मासिक ६९ हजार एक सय ४० रुपैयाँ हुन्छ ।
अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सचिवालय भन्छ– घरमा खाना पकाउन बस्नेको नागरिकता नै छैन, चालक परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यसैले खाता खोलिएन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सचिवालयले भने घरमा खाना पकाउन तथा अन्य सहयोग गर्न राखिएका कार्यालय सहयोगीको नागरिकता नभएकाले खाता खोल्न नसकिएको जनाएको छ । सवारीचालकसमेत परिवर्तन भइरहने भएकाले बैंक खाता नखोलिएको सचिवालयको दाबी छ । ‘कार्यालय सहयोगी दीनदुःखीलाई राख्नुभएको छ । उहाँहरूको नागरिकता नभएको समस्याले उहाँहरूको खाता खोल्न सकिएन । सवारीचालक पनि परिवर्तन भइरहने भएकाले उहाँहरूको पनि खाता बुझाउन नसकिएको हो,’ अध्यक्षका निजी सचिव उद्वीर नेपालीले भने ।
‘निजी बैंकमा कारोबार भएको भनेर मिडियामा आएपछि संसद्को व्यवस्थापन बोर्डबाट नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने र त्यहीँबाट कारोबार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । ‘संसद्को व्यवस्थापन बोर्डबाट नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने र त्यहीँबाट कारोबार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । अब अध्यक्षज्यूको पनि स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारीको बैंक खाता खोलिन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । अब अध्यक्षज्यूको पनि स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारीको बैंक खाता खोलिन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।